2017 | နည်းပညာပျိုးခင်း
Cisco WLC and AP upgrade
July 31, 2017 July 31, 2017 Phyo Lwin CISCO, Wireless
Firmware upgrade ကို WLC အတွက် တစ်ခါမမလုပ်ဖူးဘူး။ တလောတုန်းက WLC HA သွားလုပ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ အဲလိုနဲ့ customer ဆီကို အရင်သွားပြီး ဘာတွေလုပ်ချင်လဲ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ အဲဒီမှာ သူတို့က HA မလုပ်ခင် လက်ရှိ firmware ကိုပါ upgrade လုပ်ချင်တယ်ပြောရော။ အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်ရက်ကို ချိန်းလိုက်တယ်။
firmware upgrade လုပ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး firmware image ကို cisco ကနေ CCO account သုံးပြီးတော့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ ပြီးရင် TFTP server မှာ တင်ထားလိုက်တယ်.
ပြီးရင် အောက်က ကွန်မန်းတွေကို တခုချင်းရိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
transfer download filename AIR-CT5500-K9-8-2-151-0.aes
အဲလိုရိုက်ပြီးဘီဆိုရင် WLC က အဲဒီဖိုင်ကို tftp server ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး active partition မှာ အင်စတောလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ GUI ကနေလဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Download ကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ tftp server ကနေ စပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး active partition မှာ အင်စတောလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုပြန်စစ်နိုင်လဲဆိုတော့ show boot လို့ ကြည့်လိုက်ရင် အောက်ကလိုမျိုး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Primary Boot Image…………………………. 8.2.151.0 (default)
Backup Boot Image………………………….. 8.0.140.0 (active)
ဒီမှာဆိုရင် 8.2.151.0 က default ဖြစ်နေတဲ့အတွက် next reboot ကျရင် အဲဒီ firmware နဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ AP ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က WLC မှာ register လုပ်ပြီးဘီဆိုရင် WLC ကို reboot လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ AP ၁၀၀ ကျော်လဲ reboot ကျပြီး firmware အသစ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တရေးအိပ်ပြီး စောင့်ရဖို့များတယ်။ များသောအားဖြင့်က ရုံးချိန်ပြင်ပမှာပဲ လုပ်ကျတာများတယ်။ တကယ်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ အချိန်ကုန်သက်သာအောင်လုပ်ကျတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကျလဲဆိုတော့ wlc မှာ firmware အသစ်ကို အရင်ဆုံးအင်စတောလုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင် restart မလုပ်သေးပဲနဲ့ AP အားလုံးဆီကို firmware ကြိုပြီးတော့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ နည်းနဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်။
(Cisco Controller) >show ap image AP1
Total number of APs………………………… 119
Number of APs Initiated………………………………… 0
Completed predownloading…………………… 0
Not Supported…………………………….. 0
Failed to Predownload……………………… 0
Predownload Predownload FlexconnectAP
Name Primary Image Backup Image Status —————— ————– ————– –AP1 8.0.140.0 0.0.0.0 None (Cisco Controller) >
ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် ဒီ AP1 မှာ image 8.0.140.0 တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အောက်ကကွန်မန်းနဲ့ အသစ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရအောင်။
(Cisco Controller) >config ap image predownload primary AP1
ဒီလိုရိုက်လိုက်ရင် AP1 က firmware အသစ်ကို စပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပါဘီ။
ဒီမှာဆိုရင် 8.2.151.0 ကို စပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပါဘီ။
ပြီးသွားဘီဆိုရင် အထက်ကပုံထဲကလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာ primary က 8.0.140.0 ပဲ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
အရင်ဆုံး image swap လုပ်ပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် primary က 8.2.151.0 ဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုလိုတာက reboot လုပ်လိုက်ရင် အဲဒီ 8.2.151.0 နဲ့ ပြန်တက်လာမယ်။ ဒီနေရာမှာပြထားတာတွေက AP1 ဆိုတဲ့ AP တစ်ခုထဲနဲ့ ပြထားတာပါ။ အကုန်လုံးကို လုပ်ချင်ရင်တော့ AP1 နေရာမှာ all ဆိုတာနဲ့ အစားထိုးရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ရုံးချိန်ပြင်ပရောက်တာနဲ့ wlc မှာ save လုပ်ပြီ: reboot လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါတွေကို ရုံးချိန်ပြင်ပမတိုင်ခင်လုပ်ထားရင် တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်။
Virtual Port-channel (vPC)
July 6, 2017 Phyo Lwin CISCO, DataCenter, Switching
Data Center Nexus switch မှာ vPC(Virtual Port Channel) ဘယ်လို configuration လုပ်လဲဆိုတာလေးပါ။
vPC က IOS မှာဆိုရင် etherchannel လိုမျိုးပဲ..
ဒီမှာဆိုရင် အပေါ်က switch က nexus 5k. အောက်က switch တွေက nexus 2k
vPC လုပ်ဖို့ဆိုရင် vPC Peer, vPC peer keepalive link, vPC peer link, vPC domain စတာတွေလိုပါတယ်။ vPC peer ဆိုတာကတော့ vPC Domain လုပ်မယ့် nexus5k switch ၂ လုံး
vPC peer keepalive link ကတော့ layer3link ပါ၊ အဲဒီလင့်က management IP ဒါမမဟုတ် တခြား layber3link ကို သုံးနိင်ပါတယ်။
vPC peer link ကတော့ layer2links ပါ၊ theory အရတော့ 10G link ၂ လင့် သုံးရပါတယ်၊
ပီးရင် သုံးချင်တဲ့ feature ကို enable လုပ်ပေးရပါတယ်။
ဆိုပါစို့ nexus5k ကြားကလင့်ကိုတော့ ethernet 1/1 and 1/2 လို့ ထားလိုက်မယ်။ ပုံဆွဲတုန်းက ကျန်သွားလို့ 🙂
စပြီးတော့ configure လုပ်ကြည့်ရအောင်။
n5k1(config)#vpc domain 1
n5k1(config-vpc-domain)#peer-keepalive destination 192.168.1.10 source 192.168.1.11 vrf management
တခြားဘက်မှာလဲ အဲလိုမျိုး configure လုပ်ပေးရမယ်။ destination နဲ့ source ကတော့ ပြောင်းပေးရမှာပေ့ါ.
n5k1(config)#int ethernet 1/1-2
n5k1(config-if-range)#switchport mode trunk
n5k1(config-if-range)#channel-group 10 mode active
vpc10 အတွက်လင့်ကိုတော့ ethernet 1/3 လို့ သက်မှတ်ထားလိုက်မယ်။ ပုံဆွဲတုန်းက ကျန်သွားလို့ 🙂
n5k1(config)# int ethernet 1/3
n5k1(config-if)#channel-group 10 mode active
တခြားဘက်မှာလဲ အဲလို configure လုပ်လိုက်ရင် ရပါဘီ။
verification လုပ်နိုင်တဲ့ commands တွေကတော့
show run int po10
show int ethernet 1/1-2 brief
တကယ်လို့ အပေါ်နားက switches က Nexus 7K ဖြစ်ပြီးတော့ အောက်နားက switches တွေက nexus 5K switches တွေဆိုရင် အပေါ် က switches မှာရော အောက်နားက switches တွေမှာပါ vpc domain configure လုပ်ပြီး switches အချင်းချင်းချိတ်ထားတဲ့လင့်တွေကို trunk လုပ်ပြီး channel-group လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
နောက်မပဲထပ်ပြီးတော့ Data Center နဲ့ ပက်သက်တာတွေထပ်ရေးပါဦးမယ်။ အမှားပါခဲ့ရင်လဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ လေ့လာမှုအားနည်းချက်ဖြစ်ပြီး ဘာတွေမှားနေလဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးကြပါဦး။